मेडिकल संञ्चालक भन्छन् कोभिड पोजेटिभ देखायो कुन औषधी खाने भन्दै आउछन् ? : || www.vlognepal.com ||
November 30, 2020 Filed under कोभिड अपडेट >>>> Please Subscribe our Youtube Channel
दशैं तिहार पछि काठमाण्डौमा कोभिड संक्रमित ह्वात्तै बडे । जति चेक हुन्थ्यो त्यति बढ्यो । तर छट पछि अनपेक्षित संक्रमित आफै घटे अनि सरकार र संम्बन्धित निकाय भन्न थाल्यो संक्रमित काठमाण्डौमा घट्न थाले ! तर यथार्थ त्यो कुनै हालतमा पनी होइन । किन भने हरेक घरमा कोही न कोही बिरामी परेर तंग्रिदै आएका छन् । ज्वरो ८/९ दिन सम्म आयो मेडिकलबाट सिटामोल ल्याए र मेडिकलको भाइले भने अनुसार ज्वरो नाप्दै, अक्सिजन लेभल हेर्दै बसे ज्चरो ठिक भए पछि थप ७ दिन आइसोलेट गरे अहिले ठिक छ । अलिक शरिर कमजोर छ । पिसिआर चाहि गरिएन । यस्तो अनुभव सुनाउने काठमाण्डौमा हरेक घर भेटिन्छन् ।
एउटै फ्लाट छ एउटै ट्वायलेट छ के गर्नु कोठामा आइसोलेट गरे पनी ट्वाइलेट अरुलाई प्रयोग नगर भन्न सकिएन । पहिला मलाई ज्वरो आयो, त्यस पछि सानो छोरालाई, अनी ठूली छोरीलाई अन्त्यमा श्रीमान् लाई पनी ज्वरो आयो । तिन चार दिन सबैलाई ज्वरो आयो त्यस पछि बिसेक भो । हामीले त पिसिआर चेक गराएनौ । पालै पालो ज्वरो देखिएको आधार मा यो असत्ती कोरोनाले मेरो घरलाई पनी छोडेन भन्ठन्यौ अहिले ठिक छौ । आ हामीले त कोरोना परिक्षण पिसिआर गराएनौं । अलिक कमजोरी चाहि बनाएको छ । अब खानाले नै पेल्नु पर्ला । यो कथा काठमाण्डौ बाशी एक महिलाको कथा हो ।
उपत्यकाका धेरै मेडिकलहरु ले नै कोरोना संक्रमितलाई ठिक पारेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । सरकार संग नभएको डाटा मेडिकल संञ्चालकहरु संग छ भन्दा फरक नपर्ला । टोलै पिच्छे खोलिएका मेडिकल संञ्चालकहरुको मेडिकलमा संक्रमित आफै हिजो पिसिआर टेष्टमा पोजेटिभ देखियो के खाने होला ज्वरो आई हाल्यो भने भन्दै औषधी किन्न आएको अनुभव सुनाउछन् । त्यसरी आएका संक्रमितलाई मेडिकल संञ्चालकले ले पनी सिटामोल, आत्माबल र सुरक्षाका निम्ति पर्याप्त बेड रेस्ट अनी सास फेर्न गार्हो भो भने अस्पताल जाने भन्दै एउटा अक्सिमिटर पनी पठाउने गरेको अनुभव बताउछन् । मेडिकलहरुमा सिटामोल, जिवनजल, प्रोटिनेक्स सप्लिमेन्ट किन्न आउने संख्या बढ्नु पनी घरघरमा कोरोना छ भन्ने प्रमाण रेहेको मेडिकल संञ्चालक बताउछन् ।
राजधानीको एक प्राकृतिक आयुर्वेद उपचार केन्द्रका संञ्चालकको दिन चर्या र पसलको ब्यापार पनी ह्वात्तै बढेको छ । उनी भन्छन् कोरोना काँडा खान के के किन्न पर्छ र कोरोना भा को बेलामा खाने प्राकृतिक औषधीहरु के के हुन् भन्दै सोध्न आउने पनी ह्वात्तै बढेको सुनाउछन् । उनी थप्छन् “पिसिआर टेष्ट गरेको हो भन्दा छैन भन्ने उत्तर दिन्छन्” ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार अनि स्थानिय सरकार भने संख्या घटेका मा नै संन्तुष्ट देखिन्छन् ।